Izinhlelo Zokusebenza Zehhovisi Eliyaziwa, ezaziwa nangokuthi Izinhlelo Zendlunkulu Eziphathekayo
Ihhovisi elibonakalayo yinsizakalo enikeza ikheli lokuposa kanye nezinsizakalo zokwamukela ngocingo. Inkampani esebenzisa i service ayihlali ehhovisi ngokomzimba. Ngokuvamile izinkampani eziningana zisebenzisa ikheli lehhovisi elibonakalayo. Ngenxa yalokhu, le nsiza inikeza ukonga okukhulu ngesikhala samahhovisi wendabuko nezindleko zokwamukela. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi basebenzisa lokhu kusetha kobumfihlo bezezimali. Okusho ukuthi, ngakho-ke izimpahla ezigcinwe kwinhlangano noma ku-LLC aziboshelwe ekhelini lomnikazi, isikhulu noma umqondisi.
Uhlelo lweHhovisi eliyi-Virtual kuyatholakala kuzo zonke izifundazwe ze-50 US futhi amazwe amaningi aphesheya.
Insizakalo yobumfihlo yabaphakanyisiwe yilapho omunye wabasizi bethu avela kumarekhodi omphakathi njengezikhulu zakho nabaqondisi bebhizinisi lakho noma umphathi we-LLC yakho. Nguwe olawula ngokuphatha wonke amalungelo okuvota, ngokuba ngumnikazi wenkampani. Ngokuphawulekile, unemibhalo ongayithola ekhombisa ukuthi inkampani ingeyakho. Noma, umuntu abheke inkampani yakho noma igama lakho kumarekhodi asesidlangalaleni, abakuboni ukuhlangana phakathi kwakho nenkampani yakho. Ngakho-ke, ungaba ne-akhawunti enkulu yasebhange noma i-brokerge ngegama lakho lenkampani. Amehlo amile ngeke akuthole kalula.
Ngaphezu kwalokho, kungaba ngumnikazi wezezindlu kuwe ngokungaziwa. Ngakho-ke ,ummeli olambile wemali ephikisayo ubonani lapho efuna amafa akho? Lutho neze. Ingabe unayo imali eyanele nezinye izimpahla eziveziwe ukuze zikwenze umangalelwe? Cishe akunjalo, uma ungumnikazi wefa lakho kumathuluzi afanele asemthethweni.
Izinzuzo zeHhovisi eliSebenzayo
Kunokusizakala okuningi okutholayo lapho wena faka noma wakhe i-LLC. Lokhu kunjalo ikakhulukazi lapho wenza i-Nevada noma I-Wyoming LLC ene-akhawunti yasebhange. Lokhu kungenxa yokuthi imithetho yokuvikela impahla kule mikhawulo emibili idlula yonke eminye imibuso. Kunezinzuzo ezinkulu kakhulu zokuvikela impahla ezindaweni ezingasogwini, ezifana nalezo zeNevis LLC. Ngaphezu kwakho konke, sebenzisa ngokunenzuzo imithetho evikela abaninimasheya, abaphathi nabaqondisi. UNevada noWyoming banamandla e-US. Futhi, azikho izintela zenzuzo yombuso yenhlangano kunoma iyiphi yalezi zifundazwe. INevis inamandla emhlabeni wonke. Ngokufanayo, azikho izintela ezingenayo kule ndawo edumile. Manje, abantu base-US bakhokhiswa intela yomhlaba wonke, ngakho-ke lokho kusho ukuthi azikho ezinye izindlela zentela ezengeziwe okufanele zifakwe kulolo gunya.
Iningi labantu lisebenzisa izinkampani zakwa-Nevada, Wyoming noma ezingaphesheya kwezilwandle ngalezi zizathu zokuqala:
· Kungasebenza ibhizinisi endaweni yabo yokuhlala, noma,
Ukuvikela impahla yomuntu siqu nokwandisa ubumfihlo kanye nobumfihlo
Zombili lezi zizathu zingaba usizo olukhulu kakhulu ebhizinisini lakho. Kepha kunezinyathelo ongazithatha ukuqinisekisa ukuthi uyazibona izinzuzo ozozilindela. Futhi, ungangezelela lezi zinzuzo ngokungeza izinsizakalo zabaqokiwe ukukhulisa ubumfihlo bakho njengoba sixoxe ngenhla.
I-Nevada noma i-Wyoming Corporation esifundeni sakho sasekhaya
Inkampani eyakhelwe kunoma yiliphi izwe le-50 ithi ingenza ibhizinisi kuzo zonke izifundazwe. Ukwenza isibonelo, ake sithi uhlala eCalifornia futhi unenkampani yamaloli. Ufuna ukunciphisa isikweletu sakho sentela futhi unikeze nokuvikelwa okwengeziwe kwamafa akho. Ngakho-ke, wakhe i-Nevada Corporation yenkampani yakho yamaloli, bese ubhalisa eCalifornia njengenhlangano yakwamanye amazwe. Lokhu kwaziwa ngokuthi "iziqu zakwamanye amazwe." Izwe laseCalifornia libiza noma iyiphi imali etholakala kuleso sifundazwe.
Kodwa-ke, inhlangano yakho ingaqhubeka ithokozela isimo se-intela eNevada kunoma iyiphi imali etholakala kuleso sifundazwe. Okufanayo kuya kunoma yiliphi elinye izwe lapho ebesebenza khona elinemithetho efana ne-state state-free, noma engenazo "iziqu zangaphandle". Kepha ukuze ujabulele lezi zinzuzo zentela, kuzofanela kube yibhizinisi "elihlala". Izidingo esizinikeze ngezansi zizonquma lokhu.
Khulisa Ubumfihlo futhi Vikela Izimpahla
Ama-Nevada Corporations anikezela ubumfihlo obungenakuqhathaniswa nokuvikelwa kwempahla okuhle kakhulu kwabaqondisi, izikhulu, kanye nabanikazi bezitifiketi (abanikazi). Ngommiselo, noma abasebenza esitokisini, noma abaphathi / abaqondisi bangaboshwa nganoma yiziphi izikweletu noma izikweletu ezitholwe yinhlangano yeNevada. Futhi amagama athi stockholder ayindaba yokuqoshwa komphakathi. Abaqondisi kanye nama-Agents abhalisiwe kuphela ayindaba yokuqoshwa komphakathi. Umuntu angahlela ngisho nalezi zikhundla ngasese. Ngokusebenzisa ama-aphoyintimenti aqokiwe, ngokwesibonelo, umuntu angathuthukisa ubumfihlo kanye nobumfihlo babanikazi “bangempela” benhlangano. Usebenzisa Isevisi yethu yamagama athenjiwe, ungaqinisekiswa ukuthi igama lakho lizogcinwa liyimfihlo emehlweni abantu abajwayelekile.
Isibonelo, ungakhokha enye yebhizinisi lakho kanye nenzuzo yokutshalwa kwemali ngqo kwi-Nevada Corporation yakho. Lokhu kungandisa ubumfihlo futhi kuvikele nempahla. Umuntu angakufeza lokhu ngokusungula i-Corporation ezweni lakho lasekhaya, bese kuba nenye futhi inkampani eNevada. Inkampani ye-Nevada yona, nayo, ingasetjenziswa ukutjhugulula nokwamukela imali evela ku-home-state Corporation yakho. Ngakho-ke, ibhizinisi olisebenza ezweni lakho lasekhaya lingaqasha inkampani yakho eNevada. Lokhu kungaba yizinto ezinjengokuphatha, ukubonisana, noma ukuthengisa izinto zebhizinisi, njll.
Ihlangabezana Nesidingo Sokukhona Kokubakhona
Ngoba uzobe usungule inkampani yakho kahle njengeNhlangano yabahlali eNevada (usebenzisa uhlelo olulula, olusebenzayo lweNevada Office noma uhlelo lweHhovisi leNevada Virtual), futhi wahlela ukuqokwa kwezikhulu ezikhethekile ngeNuminee Service Service yethu, Inkampani yakho izoyithola imali yayo ngobuhlakani futhi ngemfihlo egcwele. Uzokwazi ukuzikhokhela iholo elivela kwa-Nevada Corporation. Ngoba intela yenhlangano ye-C Corporation incane kakhulu kunesilinganiso somuntu ngamunye cishe kuwo wonke amabakaki entela, ungabona okunye ukulondolozwa kwentela. (Futhi, uma inkampani isebenza ezweni elinentela engenayo yenkampani, kufanele ilandele imithetho yentela yombuso esebenza kulo. Lokhu kungahle kungafaki izinzuzo ezingenayo imali yentela uma kusetshenziswa kuphela eNevada. Bheka ngetela elinolwazi umeluleki).
Isibonelo esithe xaxa: Uma unotshalomali olukhulu lwamasheya wesitoko, ungakha iNkampani Yezikweletu Yezimali yaseNevada Limited (“LLC”) ukuze ubambe lezi zimali. Ungahle uhlelele i-Corporation yakho eNevada ukuphatha lokhu kutshalwa kwemali, futhi ukhokhele imali "yezinsizakalo zokuphatha ezinikezwe" enhlanganweni yakho eNevada kusuka kulokhu kutshalwa kwemali nge-LLC. Ngaso sonke isikhathi igama lakho ngeke libhalise njengokuhola yonke le mali engenayo, futhi ebiza intela ebizayo.
Luyini uhlelo lwe-Virtual Office?
Ukuze uzuze kubumfihlo obuphakeme bezezimali, isikweletu esinqunyelwe, nokuvikelwa kwempahla okunikezwa yiNevada Corporation yakho, kufanele ihlangabezane nezidingo ezithile "zokuhlala". Kufanele ukwazi ukufakazela ngokwanele ukuthi inkampani yakho iyibhizinisi elisemthethweni nelisebenza eNevada.
Ukuze wenze njalo, kufanele kudlule lezi zivivinyo ezine ezilula:
Inkampani kumele ibe nekheli lebhizinisi leNevada, namarisidi, noma imibhalo esekelayo njengobufakazi.
Idinga inombolo yocingo yaseNevada. 
Kufanele ube nelayisense lebhizinisi laseNevada
Inkampani noma i-LLC kumele ibe ne-akhawunti yasebhange iNevada yohlobo oluthile (ukubheka, i-akhawunti yabathengi, njll.).
Ukusebenziseka kwe-Virtual Office
Njengoba kubonakala kulezi zidingo, Ibhokisi le-PO elula noma insizakalo yokuphendula ngeke yanele. Ukuze udlule ku-muster, kufanele kube nehhovisi eliphilayo, eliphefumulayo elixhasa i-Nevada Corporation yakho. Imbangela yokuvula bese kusekelwa ihhovisi ukuthi kungabiza impela, ikakhulukazi uma i-Corporation eNevada ingukululeka kwecebo lakho lokwehliswa kwentela futhi ufuna ukukhulisa imali oyitshalile enhlanganweni yakho. Lapho uvula ihhovisi, kuzofanela ufake irenti, abasebenzi, izinsiza, izingcingo nezinsizakalo zedatha, izintela zomsebenzi, izimpahla nezinshuwalense. Ake sibeke lokhu "ezindlekweni zanyanga zonke":
Ukuqashwa Kwehhovisi $ 1500
Izinsiza $ 200
Ucingo kanye nedatha $ 100
Izintela Zokuqashwa $ 300
Lezi zindleko zengezwe ngokushesha kusilinganiso se- $ 6,00 ngenyanga. Eqinisweni, lezi yizilinganiso zezindleko zokulondolozeka, nezindleko zangempela ezingaba khona ziphezulu kakhulu. Phindaphindeka lesi sibalo nge-12, futhi ungabona ukuthi ngisho nehhovisi eliyisisekelo "lesisekelo sokusebenza" lingabiza inkampani yakho $ 72,000 ngonyaka.
Kepha sinekhambi elinengqondo lokuhlangabezana nezidingo zakho! Singakufeza konke lokhu inkampani yakho iqala nje $ 995 kuya ku- $ 2,995 unyaka wonke, kuya ngephakheji oyikhethayo. Ngohlelo lwethu lwe-Nevada noma lweWyoming Office (olubizwa nangokuthi uhlelo lwehhovisi leNevada noma leWyoming), singanikeza inkampani yakho ikheli elifanele nehhovisi lebhizinisi (elitholakala ngokuqokwa), elinabantu abasebenza izinkontileka ngezikhathi zamahora ejwayelekile webhizinisi, umuntu ophilayo ophendulayo Inombolo yakho yocingo (eyabiwe) yebhizinisi lakho, insizakalo yokuthumela i-imeyili eqondene nomuntu uqobo, nosizo ngokuvulwa kwama-akhawunti asebhange noma awokuhweba. Sinikeza insizakalo efanayo ezindaweni zethu eziningi ezingasogwini.
Kufakwe ohlelweni lwethu lweHhovisi Lezinkampani Ezihlanganisiwe Nevada Corporation:
· Ikheli lomgwaqo laseNevada langempela - elinabasebenzi abanezinkontileka abasuka e8am baye kwi5pm
Isikhathi sePacific ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu.
· Imeyili ukuthumela service uqobo izidingo zakho
I-Nevada yabelana ngenombolo yocingo ephendulwa ngumamukeli obukhoma
Inombolo yefekisi yakwaNevada
· Siza ukuvula i-akhawunti yasebhange iNevada uma uthanda
· Siza ukufaka isicelo selayisense lebhizinisi laseNevada
· Abasebenzi bezinkontileka ezibukhoma ukubingelela abashaya ucingo ngezikhathi zokusebenza zebhizinisi.
· Service ummeli olungisa izivumelwano
· Inkonzo yobunobhala
Uhlelo Lezinkampani Ezihlanganisiwe lwe-Nevada Virtual Office luzokubiza ama- $ 110 kuphela uma ukhokha inyanga nenyanga ngokuzibophezela konyaka owodwa, kepha futhi, ungasebenzisa isaphulelo sethu se- $ 325 sokukhokha kwangaphambili konyaka. Ukhokha u- $ 995 kuphela unyaka wonke wenkonzo.
Ukonga Ehhovisi Ejwayelekile
Lawa mapakheji angakusindisa izinkulungwane zamaRandi ezindlekweni zokusebenza, ngenkathi kulondolozwa yonke imali yakho oyizuzile kanzima, futhi oyitholile, nokwehliswa kwentela.
Uhlelo lwethu lwe-Nevada Corporate Office luhlangana futhi lunelise wonke amazinga adingekayo ekunqumeni kwenhlangano okuhlala iNevada. Futhi, lezi zinsizakalo zilethwa ngendlela enolwazi, enobungane. Abasebenzi abanolwazi abebanikela ngalezi zinsizakalo iminyaka engaphezu kwe-30 baphatha izindaba zakho. Ngakho-ke, singanikeza lolu hlelo ngamanani entengo enjalo ngenxa yomthamo wethu omningi webhizinisi nenhlangano esebenza kahle.
Inombolo ekuleli khasi noma ifomu elinikezwe ngenhla lingasetshenziselwa ukuthola imininingwane eyengeziwe yezindlela ezinhle ze-TAX SAVINGS nezinketho ze-PRIVACY ezitholakala noHlelo Lwamahhovisi ENkampani Yakho Oluhlanganisiwe.